Ny mozika tsy mijanona mihitsy any New Orleans, na dia mandritra ny rivodoza Ida misy fiantraikany goavana aza
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny mozika tsy mijanona mihitsy any New Orleans, na dia mandritra ny rivodoza Ida misy fiantraikany goavana aza
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny filoham-pirenena amerikana Biden ao amin'ny FEMA
Ny sokajy 4 ny rivodoza Ida 120-150 mph sy tafiotra mahery vaika 'catastrophic' dia tampon-trano no nampisondrotra ny renirano Mississippi ary nihozongozona ny tilikambo avo. Ny tafio-drivotra izao dia namela olona efa ho iray tapitrisa tsy nanana herinaratra.
Ny rivodoza Ida dia namela ny tanànan'i New Orleans tsy hanana herinaratra noho ny "fahasimbana amin'ny famindrana loza", hoy ny Entergy New Orleans.
Ny fanjakana amerikana any Mississippi dia nitatitra ny fahatapahan'ny herinaratra manerana ny fanjakana
Ireo mpanjifa elektrika dia mety tsy hanana herinaratra mandritra ny herinandro ho avy.
Mivavaka ho an'ny New Orleans. Toa an'i Katrina hatrany hatrany ny hafatra ankapobeny hita ao amin'ny Twitter.
Mila vavaka i Louisiane. Manana ny taha ambany indrindra amin'ny vaksiny COVID-19, ity fanjakana amerikana ity dia manana olona marobe any amin'ny hopitaly sy amin'ny rivotra. Ny rivodoza Ida dia efa tafiotra mahery sy mahatsiravina kokoa raha oharina amin'ny Rivo-doza Katrina izay namono olona 1833 tamin'ny 2005.
Bitsika feno fahatezerana milaza hoe:
Mamono tena sy ny hafa ny anti-vaxxers + anti-maskers @[email voaaro] iza no mametraka ny kariera voalohany hamono ny ppl. Hopitaly feno (covid) mandritra Rivo-dozae Ida no porofon'ny zava-mitranga rehefa tsy mahomby amin'ny hetsika ny mpitondra politika (fidio TSIA amin'ny zavatra rehetra)
Ny hopitaly any atsimo atsinanana dia miha oksizena, ary ireo faritra traboina indrindra (toa an'i Louisiana) dia 12 ka hatramin'ny 24 ora ihany no sisa tavela. Raha manelingelina ny rojo famatsiana mihitsy ny Rivo-doza Ida dia mety hampidi-doza ny vokany.
Torohevitra: Ny olona any Louisiana sy ny fanjakana hafa izay mety very fahefana noho ny rivo-doza Ida, fenoy rano ny fantsonao. Ampiasao ity rano ity hamenoana ny fitoeram-pidianao mba hahafahanao mampiasa ny kabine. Ny tanàna malaky dia midika fa tsy mandeha ny paompy rano ka tsy misy rano.
- Ny Paroasy Orleans rehetra - izay tanànan'i New Orleans - dia tsy misy herinaratra, hoy i NOLA Ready, fanentanana fanomanana vonjy maika any New Orleans.
Ny fahatapahana dia mety noho ny olana goavana amin'ny famindrana.
Hoy ny bitsika iray: Nandehandeha niaraka tamin'ireo efatra aho New Orleans fantsona. Ilay ABC dia efa nandefa fandaharana mahazatra tato anatin'ny ora vitsivitsy. Manontany tena aho raha nazera tamin'ny rivotra izy ireo ary tsy afaka niverina intsony.
Ny sokajy 4 ny rivo-doza Ida namely an'i Louisiana 16 taona taorian'ny fandravana ny rivodoza Katrina; Ny governora John Bel Edwards dia nilaza fa ny tafio-drivotra no mety ho ratsy indrindra tany Louisiana hatramin'ny 1850.
Mihorohoro ny tranobe avo, antso 911 no tsy mamaly intsony.
Na izany aza tsy mitsahatra ny mozika any New Orleans. "Na dia ho an'ny" rivodoza manova fiainana aza "Phil Lavelle dia namoaka.
Tsy mijanona mihitsy any New Orleans ny mozika. Tsy ho an'ny rivo-doza "manova fiainana" aza #HurricaneIda pic.twitter.com/wc3s8STIEq
- Phil Lavelle 📺 (@phillavelle) Aogositra 29, 2021
TWEET: Raha fantatrao fa misy fikambanana TRUSTED sy vette izay miomana hanome fanampiana an'ireo tratry ny rivo-doza Ida mba ampahafantaro ahy mba hahafahako manome. Tadidiko i Katrina. Tadidiko ny tsy fitandreman'ny fanjakana sy ireo olona nijaly noho izany. Tsy miverina intsony.
Nisy tatitra iray nilaza fa milamina tokoa ao amin'ny Bourbon Street any New Orleans, maizina ny zava-drehetra. Mandondona ny orana sy ny rivotra.
Eny ... tsy fantatro akory izay atao hoe mpamosavy fa mampatahotra. #HurricaneIda
🎥 Scott Alexander ao amin'ny New Orleans CBD pic.twitter.com/Yy51B2ECn3
- Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) Aogositra 29, 2021
Tamin'ny 8.00 alina dia nidina avy amin'ny rivodoza sokajy faha-4 avo lenta ny rivodoza Ida ho amin'ny rivodoza sokajy faha-3 ambany ary hitohy hihena ny herin'ny alina. Mbola goavana ny fiatraikany.
Ny filoha amerikana Biden nisioka hoe:
Misaotra tamin'ny asa mafy nataon'i @FEMA, efa nametraka ekipa efa napetraka mialoha, fitaovana, ary ekipa valiny izahay rivo-dozaIda. Anisan'izany ny mpiasan'ny FEMA maherin'ny 2,400, sakafo sy litera an-tapitrisany, mpamokatra herinaratra, ekipa mpikaroka sy mpamonjy, ary fiara mpamonjy voina 100 mahery.